UKRAINE WAXAY DHOOFISAA BAASTADA UGU BADAN EU-DA - UKRAINE
Ukraine waxay dhoofisaa baastada ugu badan EU-da
Ukraine ayaa baasto u dhoofisa dalal badan oo Yurub ah, taas oo 69% ka dhoofisa dhoofinta. Bisha Janaayo-Nofeembar 2016 ee Midowga Yurub, badeecadani waxaa lagu bixiyay $ 17,600,000, taas oo 4.2 jeer ka badan wakhtiga la midka ah ee 2010 ($ 4,200,000).
Mid ka mid ah waddamada ugu horreeya ee soo dejinta wax soo saarka EU-da sannadka 2016 wuxuu ahaa Germany, taasoo ka dhigtay 13.6% dhammaan badeecooyinka la isku qurxiyo, booska labaad waxaa qaaday England, taasoo hoos u dhacday 12.6%, kaalinta saddexaadna waxaa qaaday Spain, taasoo iibsatay isla qiyaasta isla sida England - 12.3%.
Inta badan, Ukraine u dhoofin EU noodleka wax lagu kariyo. Wax soo saarkani wuxuu ka dhigan yahay 88.4% wadarta dhoofinta, kaasoo kor u kacay 4 jeer 6dii sano ee la soo dhaafay marka loo eego 2010. Waqtiga xaadirka ah, dhoofinta baastada ee Ukraine ka badan tahay soo dejinta. Sanadka 2016-ka, dollar kasta oo ka mid ah baastada la soo dhoofiyo ayaa ka dhigtay 1.8 bilyan oo ah dhoofinta Uk.